Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို နေ့စဉ် သတင်းစာ မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > စီးပွားရေး > ဆောင်းပါး
ပြန်လည်သုံးသပ် ညှိနှိုင်းနေရတဲ့ ပုဂ္ဂလိကဘဏ် အတိုးနှုန်းများ လျှော့ချမည်လား	အင်္ဂါနေ့၊ မေလ ၁၄ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၁၅ နာရီ ၄၀ မိနစ်	ခင်မျိုးသွယ်	(ဆောင်းပါး) စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် အများစုက နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများနှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန်အတွက် ဘဏ်တိုးနှုန်း လျှော့ချပေးစေလိုသည့် ...
အမေရိကန် GSP က ချက်ချင်း အကျိုးမထူးသော်လည်း ရေရှည်အကျိုးရှိနိုင်	တနင်္လာနေ့၊ ဧပြီလ ၂၉ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၂၁ နာရီ ၂၃ မိနစ်	ခင်မျိုးသွယ်	အမေရိကန် အစိုးရအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအား အခွန် သက်သာကင်းလွတ်ခွင့် (GSP) ကုန်သွယ်မှု အထူးအခွင့်အရေး ပေးမည်ဖြစ်ရာ ...
ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး ပြိုကျမှုမှ ပြည်တွင်းရွှေဈေးကွက် ဝယ်လိုအား လိုက်	တနင်္လာနေ့၊ ဧပြီလ ၂၂ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၁၃ နာရီ ၅၂ မိနစ်	ခင်မျိုးသွယ်	နှစ်ပေါင်း ၂၀ အတွင်း ကမ္ဘာ့ရွှေဈေးများ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် အကြီးမားဆုံး ကျဆင်းလာခြင်း မှာ ပြည်တွင်း အခေါက်ရွှေဈေးများ ...
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အိမ်ခြံမြေဈေးကွက် အေး၊ စောင့််ကြည့်လျက် ရှိကြ	သောကြာနေ့၊ မတ်လ ၂၉ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၁၄ နာရီ ၄၃ မိနစ်	ခင်မျိုးသွယ်	ရန်ကုန် အိမ်ခြံမြေ ဝယ်ရောင်း ဈေးကွက် တခုလုံးအနေဖြင့် ဖေဖော်ဝါရီလမှ စကာ ဈေးကွက်အေးနေပြီး အငှားဈေးကွက်ကသာ ...
၉ လအတွင်း နှမ်းရောင်စုံ တန်ချိန် တသိန်းကျော် ပြည်ပ တင်ပို့ ရောင်းချနိုင်ခဲ့	တနင်္လာနေ့၊ မတ်လ ၀၄ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၁၀ နာရီ ၃၉ မိနစ်	ခင်မျိုးသွယ်	မြန်မာနိုင်ငံမှ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သည့် နှမ်းရောင်စုံ မက်ထရစ်တန် ၁၀၀,၀၀၀ ကျော် တင်ပ်ို့ရောင်းချပြီးဖြစ်ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ...
ဟိုတယ်လုပ်ငန်းများ တိုးပွားလာသော်လည်း လိုအပ်နေဆဲပါ	ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၇ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၂၁ နာရီ ၀၃ မိနစ်	ခင်မျိုးသွယ်	မြန်မာနိုင်ငံ၏ ခရီးသွားရာသီအတွင်း နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည် အဝင် တိုးတက်လာခြင်းနှင့်အတူ ဟိုတယ်ဇုန်များရှိ ဟိုတယ်အခန်းများ တိုးချဲ့လာခြင်း ...
မြန်မာ့ဆား၊ ဘင်္ဂလားနှင့် ဆားဈေးကွက်	သောကြာနေ့၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၂၂ နာရီ ၁၇ မိနစ်	ခင်မျိုးသွယ်	မြန်မာနိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်သည့် နေလှမ်းဆား တန်ချိန် ၅,၀၀၀ ကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ ဝယ်ယူရန် ကမ်းခဲ့ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက ....
ရန်ကုန် အိမ်ခြံမြေဈေးကွက် နေရာကွက်၍ ဈေးကွက်လှုပ်ရှားနေ	ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၂၁ နာရီ ၀၀ မိနစ်	ခင်မျိုးသွယ်	ရန်ကုန်မြို့၏ အိမ်ခြံမြေ ဈေးကွက်မှာ အချို့နေရာများတွင် အရောင်းအဝယ် ပုံမှန်ရှိသော် လည်း အထူးသဖြင့် စီးပွားရေး တွက်ခြေဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းများအနီးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဖြစ်နိုင်ခြေနေရာများတွင် သွက်လက်စွာ ...
နိုင်ငံတကာ လုပ်ငန်းရှင်တွေကို မြန်မာတွေ ဘယ်လိုယှဉ်မှာလဲ	အင်္ဂါနေ့၊ အောက်တိုဘာလ ၀၉ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၄ နာရီ ၁၆ မိနစ်	နေလင်းအောင်	၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အာဆီယံ စီးပွားရေး အသိုက်အဝန်း (AEC) စတင်ချိန်တွင် မြန်မာပြည်တွင်း လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့်နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ယှဉ်နိုင်ရန်အတွက် ...
၂၀၁၃ တွင် လွတ်လပ်သည့် ငွေကြေးမူဝါဒ ကျင့်သုံးရန် မြန်မာလျာထား	အင်္ဂါနေ့၊ စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၁၄ မိနစ်	ဒင်နီရယ် တန်း ကိတ်	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက ယခင် စစ်အစိုးရဟောင်းမှ ပြောင်းလဲလာသော အစိုးရသစ်ထံသို့ ငွေကြေးများ ထည့်ဝင်မြှုပ်နှံ ရန် ပြင်ဆင်နေကြပြီဖြစ်၍ ဈေးနှုန်းများနှင့် ဘဏ်များ တည်ငြိမ်နေစေရန် လာမည့်နှစ်ဝက်တွင် လွတ်လပ်သည့် ...
« ရှေ့ဆုံးမျက်နှာသို့ ရှေ့တမျက်နှာသို့ 1234နောက်တမျက်နှာသို့ နောက်ဆုံးမျက်နှာသို့ »	စာမျက်နှာ2စုစုပေါင်း 4	ကြော်ငြာ
We have 246 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved